2012-05-27 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​မိ​မိ​သုံး​ခဲ့​တဲ့ password, product key and serial keys ​များ​ကို ​ရှာ​ပေး​မယ့် Spotmau Windows Password & Key Finder (v-6.0.1.3)
​ဒါ​က​တော့ ​မိ​မိ​ကွန်​ပျူ​တာ​မှာ ​သုံး​ခဲ့​ဖူး​တဲ့ username and password, Microsoft product key, window license key ​စ​သည်​တို့​ကို ​ပြန်​ပြီး ​ရှာ​ပေး​နိုင်​တဲ့ Spotmau Windows Password & Key Finder 6.0.1.3 ​နဲ့ ​မိတ်​ဆက်​ပေး​ပါ့​မယ်. ​ရှာ​ပေး​နိုင်​တာ​တွေ​က​တော့ email password, Msn password, gmail password, yahoo messenger password, outlook express (or) Thunderbird ​စ​တာ​တွေ​ရဲ့ password ​တွေ​ကို​လဲ ​ပြန်​ရှာ​ပေး​နိုင်​ပါ​တယ်. ​ကဲ​ဒီ​လောက်​ဆို​ရင် ​ဘာ​တွေ​ကို ​လုပ်​ပေး​နိုင်​တယ်​ဆို​တာ​ကို ​သိ​လောက်​ပြီ​လို့ ​ထင်​ပါ​တယ်။
​အ​ထဲ​မှာ license version ​ဖြစ်​ပြီး​သား sotware ​တွေ​ရဲ့ key ​တွေ​ကို​လည်း ​ရှာ​ပေး​နိုင်​ပါ​တယ်. ​လို​အပ်​တဲ့ ​သူ​များ ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​ယူ​နိုင်​ပါ​တယ်. ​ဘယ် software ​မ​ဆို size ​သေး​သေး​လေး​ဘဲ ​နောက်​မှ ​ဆွဲ​လဲ ​ရ​တာ​ပဲ​ဆို​ပြီး ​နေ​လိုက် ​တ​ကယ့်​တ​ကယ် ​လို​လည်း​လို​အပ်​ရော ​ဘယ်​နား​က ​ရှာ​ရ​မှန်း၊ Download ​လုပ်​ရ​မှန်း ​မ​သိ​တော့​ဘူး။ ​အဲ့​ဒီ့​တော့ ​လုပ်​ထား​သင့်​ပါ​တယ် ​လို့​ပဲ ​တိုက်​တွန်း​လိုက်​ပါ​တယ်။ ​အ​ဆင်​ပြေ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်။
Minus | Mediafire | Ifile
zawgyi ​နှင့် pagemaker ​ပြ​ဿ​နာ
​ဒီ​မေး​ခွန်း​ကို ​မေး​တဲ့​လူ ​တော်​တော်​များ​ပါ​ပြီ . ​ကျွန်​တော်​တို့ zawgyi ​နဲ့ ​စာ​ရိုက်​လို့​ရ​တယ် ​ဆို​ပေ​မယ့် . Unicode ​ကို​လက်​ခံ...
​မိ​မိ​သုံး​ခဲ့​တဲ့ password, product key and seri...